Tag: mgbaàmà | Martech Zone
Gịnị Bụ A CRM? Kedu uru ndị dị n'iji otu?
Tuzdee, Machị 9, 2021 Tuzdee, Machị 9, 2021 Douglas Karr
Ahụla m ụfọdụ nnukwu mmejuputa CRM na ọrụ m… na ụfọdụ ndị jọgburu onwe ha. Dị ka teknụzụ ọ bụla, ijide n'aka na ndị otu gị na-arụ ọrụ obere oge na ya ma nwekwuo oge ịnye ya uru bụ isi ihe na-akpata nnukwu CRM mmejuputa. Ahụla m usoro CRM na-emezighị emezi nke na-egbochi ndị ahịa ahịa… na CRM ndị a na-ejighị ya nke mere ka mgbalị na ndị ọrụ mgbagwoju anya gbasaa. Kedu ihe bụ CRM? Ọ bụ ezie na anyị niile na-akpọ ngwanrọ na-echekwa ozi ndị ahịa
ClickTale abụrụla ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ nyocha ahụ, na-enye data omume na nkọwapụta doro anya nke na-enyere ndị ọkachamara ecommerce na ndị nyocha aka ịkọwapụta ma melite nsogbu na saịtị ha. Ihe Nleba Anya ohuru nke ClickTale na-enye ntoputa ozo, nwere uzo nenwepu koodu nke ichikota ihe n’ile gi. Dị nnọọ na-arụtụ aka gị ihe omume mmewere na kọwaa ihe omume… ClickTale ka ndị ọzọ. Na Visual Editor, Clicktale bụ otu n'ime ụlọ ọrụ izizi iji nye azịza n'ime
Ndi Emojis Cool Na Nkwukọrịta Ahịa Gị? ?
Monday, August 8, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Amaara m na m ji? ke aha, ma m n'ezie pụtara?. Onwe m, ereghị m iji ojiji emojis (ihe ngosi eserese nke emoticons). N’ihe banyere nkwukọrịta azụmahịa, ahụrụ m emojis n’ebe n’agbata ụzọ mkpirisi ederede na cussing. Onwe m, enwere m mmasị iji ha na njedebe nke okwu Facebook na-eme mkparị, naanị iji mee ka onye ahụ mara na achọghị m ka ha tie m aka na ihu. ? Kedu ihe ọ bụ
Nkwalite nke Mgbasa Ozi na Mgbasa Ozi
Monday, April 25, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Na akwukwo ha na ahia ndi mmadu, Atlas na enye otutu onu ogugu banyere ahia na mgbasa ozi ndi mmadu. Mgbe ị na-etinyekwu oge na igwe mkpokọta, 25% nke ndị mmadụ na-eji 3 ma ọ bụ karịa ngwaọrụ kwa ụbọchị, na 40% nke ndị mmadụ gbanwere ngwaọrụ iji mezue ọrụ Gịnị bụ ahịa ndị mmadụ? Applicationsfọdụ ngwa na nyiwe na-enye ndị mgbasa ozi ikike bulite atụmanya ma ọ bụ ndepụta ndị ahịa iji dakọtara ndị ọrụ n'etiti ha abụọ. Ndepụta nwere ike ibudata ma kwekọọ na ndị ọrụ
Gini bu Omni-Channel? Kedu ka o si emetụta ụlọ ahịa ezumike a?
Tọzdee, Disemba 17, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Afọ isii gara aga, ihe ịma aka kasịnụ nke ịre ahịa n'ịntanetị bụ ikike ijikọ, ịhazi, na ijikwa ozi na ntanetị ọ bụla. Dika uzo ohuru putara ma bawanye na ndi mmadu, ndi ahia gbakwunyere otutu ihe na otutu ihe obula ha. Nsonaazụ (nke ka bụkarị), bụ nnukwu mkpọsa na ozi ire ahịa na-akụda akpịrị ọ bụla. Ndaghachi azụ na-aga n'ihu - ya na ndị ahịa na-ewe iwe na-ewepu aha ma zoo site na ụlọ ọrụ ha
Thursday, July 30, 2015 Douglas Karr
Ike agwula gi na okwu omnichannel na njem ndi ahia? Gaghị adị mma karịa, n'ihi na ihe akaebe na-apụtawanye nke ọma na okwu ndị a dị oke mkpa na usoro okike nke azụmaahịa taa. Kedu ihe bụ ahịa Omnichannel? Omnichannel ahia bu ojiji nke uzo di iche iche n'ahịa ahia na olile anya na ndi ahia. Channels nwere ike ịgụnye otu ma ọ bụ karịa mgbasa ozi ma ọ bụ ngwaọrụ ma gụnye mgbasa ozi mmekọrịta, engines na-achọ, netwọkụ mgbasa ozi, mgbasa ozi ọdịnala, ozi ziri ezi, email, ekwentị mkpanaaka na
Agbanyeghị na ndị ahịa ahịa data na-atụkwasị obi na data ndị ọzọ, nyocha ọhụụ nke Econsultancy na Signal wepụtara na-ekpughe mgbanwe na ụlọ ọrụ ahụ. Nnyocha ahụ chọpụtara na 81% nke ndị na-ere ahịa na-akọ na ha na-enweta ROI kachasị elu site na atụmatụ ha na-etinye data mgbe ha na-eji data nke mbụ (ma e jiri ya tụnyere 71% nke ndị ọgbọ ha na isi) naanị 61% na-ekwu banyere data ndị ọzọ. A na-atụ anya mgbanwe a ka ọ mikwuo emie, na 82% nke ndị ahịa niile nyochara atụmatụ ime ka ha dịkwuo elu
Ikekwe ị zara ee… na nke anyị bụ ihe ịma aka. Enweghi nhazi, nkewa na ndakpọ olileanya bụ isiokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ sitere na nchọta nke Cross-Channel Marketing and Technology Survey, nke Signal wepụtara (nke bụbu BrightTag). Nsonaazụ nke ọmụmụ a gosipụtara eziokwu ahụ na ndị na-ere ahịa anaghị eche na mgbasa ozi mgbasa ozi na-enyere ha aka inweta ahịa na-enweghị ahịa nke ndị ahịa na-atụ anya n'aka ụdị taa. Signal nyochara akara 281 ika na gị n'ụlọnga marketers,